सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? – Krazy NepaL
May 19, 2021 986
एजेन्सी । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार हरेक मानिसको व्यक्तित्व उनीहरुको राशि अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। कयौँ ज्योतिषशात्रका अनुसार तपाईको जति आधुनिक भएपनि यस कुरालाई नकार्न सकिदैन् की राशि अनुसार मानिसको ग्रह र नक्षत्रमा गहिरो प्रभाव पर्ने गर्दछ।
राशिले व्यक्तिसँग जोडिएका कयौँ आदतका बारेमा बताउने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई केही राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन राशिका व्यक्ति निकै कन्जूस हुने गर्दछन्। यिनीहरु पौ खर्च गर्नमा भन्दा पैसा बचत गर्नेमा विश्वास गर्ने गर्दछन्।
मेष राशिका व्यक्ति अरुका सामु झुटो सान देखाउनेमा विश्वास गर्दैनन्। यिनीहरु फाल्तुमा पैसा खर्च गर्नु बकवास हुने सोच राख्दछन्। मेष राशिका व्यक्ति निकै मेहनती हुने गर्दछन् र यिनीहरु आफ्नो मेहनतको कमाई सोचविचार गरेर मात्र खर्च गर्ने गर्दछन्।
कर्कट राशिका व्यक्ति अधिक खर्चालु हुँदैनन् र मेहनत गरेको कमाएको पैसा संजय गर्नु पर्ने सोच राख्ने गर्दछन्। यिनीहरु फाल्तु खर्च गर्दा आफूले मेहनत गरेको सम्झने गर्दछन्। यस राशिका मानिस निक्ै समझदार हुने गर्दछन् र पैसा खर्च गर्ने मामिलामा सोच विचार गरेर मात्र गर्ने गर्दछन्। यिनीहरु जीवनमा कन्जूस गर्ने गर्दछन् र पैसा बचत गरेर राख्ने गर्दछन्। यिनीहरु जीवनमा पैसा जोड्नका लागि केही कठिनाई समेत सहन गर्ने गर्दछन्।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कन्या राशिका मानिस सबैभन्दा बढी कन्जूस हुने गर्दछन्। फाल्तु मात्र हैन आफ्नो आवश्यकतामा खर्च गर्न पनि यिनीहरु लोभ गर्ने गर्दछन्। कन्या राशिका मानिस लजालु स्वभावका हुने गर्दछन्। तर पनि यिनीहरु भित्र अनजानमा कन्जूसको भावना पैदा हुने गर्दछ।
सामान्य लाइफमा धेरै भरोसा गर्ने वृश्चिक राशिका व्यक्तिको स्वभाव हुने गर्दछ। साथै कम पैसा खर्च गर्ने यिनीहरुको स्वभाव हुने गर्दछ। यिनीहरु आफै पैसा खर्च गर्दैनन् र परिवार तथा पार्टनरले पैसा खर्च गर्दा रिसाउने गर्दछन्।
Prevमहिनावारी अघि नै थाहा पाउन सकिन्छ गर्भ रहेको, यस्ता लक्षण देखिए रहनुहोस् सावधान !
डोली चढाएर बिदाइ गर्ने बेलामामा सेतो कात्रो ओढाएर बिदाई गर्न बाध्य बनाइस
लीवर खराब हुनुअघि शरीरले दिन्छ यी संकेत, यस्ता लक्षणलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता
सेतो कपडामा चामल बाँधेर माहाकालीलाई चढाउनुहोस्, चम्किनेछ भाग्य
तपाइले बट्टाईको अण्डा खानु भएको छ ? यस्ता यस्ता रोगको लागि अचुक ओखती हो बट्टाईको अण्डा
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (44919)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (23681)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (18370)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (16423)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (14616)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13648)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (12779)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (12654)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12508)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12175)
श्रीमानलाई असाध्यै माया गर्छन यी ४ राशीका श्रीमती, हरेक पलमा दिन्छन् साथ
मरिसकेका मानिस किन आउँछन् सपनीमा ? यी हुन सक्छन कारण :
रुखा खोकी र ज्वरो नआउँदा पनि हुनसक्छ कोरोना संक्रमण, यी हुन् यसका थप नयाँ लक्षण